Action plan for mala - Inglês - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: action plan for malaria control ; (Inglês - Birmanês)
Seven trials were evaluating already approved treatments for malaria, including four studies on hydroxychloroquine or chloroquine.
စမ်းသပ်မှု အများအပြားက ဟိုက်ဒရိုအောက်ဆီကလိုရိုကွင်းနှင့် ကလိုရိုကွင်းအပေါ် လေ့လာမှု လေးခု အပါအဝင် အတည်ပြုထားသော ငှက်ဖျား ကုသမှုများကို လေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
The partners further announced plans for preclinical testing andaPhase I clinical trial by July 2020.
မိတ်ဖက်သုတေသနအဖွဲ့များသည် 2020 ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ တွင်ပြုလုပ်မည့် အကြိုကုသမှု စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အဆင့် I စမ်းသပ်ကုသမှုတို့အတွက် အစီအစဉ်များကိုလည်း ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
They also outline controls necessary to address those risks, and contingency plans for situations that may arise asaresult of outbreaks.
၎င်းတို့က ထိုဘေးအန္တရာယ်များကို ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သော ထိန်းချုပ်မှုများကိုလည်း ဖော်ပြပေးပြီး ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု၏ ရလဒ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာနိုင်သော အခြေအနေများအတွက် အရန် အစီအမံများကို ဖော်ဆောင်နိုင်သည်။
Bali was reported as least able among the 20 most popular destination cities in terms of preparedness, while cities in Australia were considered most able.Australia released its Emergency Response Plan for Novel Coronavirus (COVID-19) on7February.
သြစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့များအနေဖြင့် အရန်အသင့်ရှိမှု အလိုအပ်ဆုံးအဖြစ်ရှိရန် လိုအပ်နေချိန်၌ ဘာလီကျွန်းအနေဖြင့် ထင်ရှားအကျော်ကြားဆုံးနေရာ 20 အတွင်း အရန်အသင့်ရှိမှုပြင်ဆင်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်းခံရသည်။ သြစတြေးလျသည် ဖေဖော်ဝါရီလ7ရက်နေ့၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ် (COVID-19) အတွက် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
&quot; The outbreak disrupted plans for the 2020 Summer Olympics, which were originally scheduled to start at the end of July; the International Olympic Committee announced on 24 March that the event will be &quot;&quot;rescheduled toadate beyond 2020 but not later than summer 2021&quot;&quot;.Casinos and other gaming venues worldwide have closed and live poker tournaments have been either postponed or cancelled. &quot;
ဇူလိုင်လ အကုန်ပိုင်းတွင် စတင်ကျင်းပရန် မူလကစီစဉ်ခဲ့သော 2020 နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲ၏အစီအစဉ်များသည် ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့် ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကော်မတီသည် “2021 နွေရာသီထက် နောက်မကျဘဲ 2020 ခုနှစ်အလွန် နေ့ရက်တစ်ရက်တွင် ပြင်ဆင်ကျင်းပနိုင်လိမ့်မည်”ဖြစ်ကြောင်း မတ်လ 24 ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကာစီနို လောင်းကစားရုံများနှင့် အခြားဂိမ်းကစားနိုင်သည့် နေရာများကို ပိတ်ထားခဲ့ရပြီး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်၍ ဖဲချပ်ကစားသည့်ပြိုင်ပွဲများကိုပါ အချိန်ရွှေ့ဆိုင်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။
For an already-approved drug (such as hydroxychloroquine for malaria), Phase III-IV trials determine in hundreds to thousands of COVID-19-infected people the possible extended use of an already-approved drug for treating COVID-19 infection.
(ငှက်ဖျားကုသရန်ဖြစ်သော ဟိုက်ဒရောက်စီကလိုရိုကွင်းကဲ့သို့သော) အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ဆေးဝါးအတွက်၊ အဆင့် III-IV စမ်းသပ်မှုများသည် COVID-19 ကူးစက်မှုကိုကုသခြင်းအတွက် အတည်ပြုပြီးဖြစ်သောဆေးဝါးကို ရာထောင်ပေါင်းများစွာသော COVID-19-ကူးစက်ခံထားရသူများတွင် ဖြစ်နိုင်သော ချဲ့ထွင်အသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။
nyatakan (Malaio>Chinês (simplificado))mazigazi (Suaíli>Inglês)kasingkahulugan ng palusugin (Tagalo>Inglês)enige tydsduur (Inglês>Africâner)sensittivitajiet (Maltês>Inglês)unprofessionellen (Alemão>Holandês)anu ang movie review (Tagalo>Inglês)muffin tins (Inglês>Africâner)me aaj nahi aa sakta meri tabiyat kharab he (Hindi>Inglês)sniegti (Letão>Húngaro)toku oranga (Maori>Inglês)kiddy (Inglês>Alemão)sonne (Alemão>Armênio)mata helang (Malaio>Inglês)kundservice (Espanhol>Inglês)i te rangi nei (Maori>Inglês)tak for dine overvejelser (Dinamarquês >Inglês)interoperabilitätskomponente (Alemão>Inglês)porċina (Italiano>Húngaro)epistemologi (Malaio>Chinês (simplificado))essay of mere jeevan ka lakshya business woman (Hindi>Inglês)boegschroef (Holandês>Inglês)ano ang business organization (Inglês>Tagalo)cara cara menjaga kesihatan (Malaio>Inglês)essay on taxi rank (Inglês>Africâner)